सावधान !! यसरी धमाधम भित्रिए नेपालमा न’क्कली नोट : दशैँको मुखमा ३ लाख १९ हजार रुपैयाँ सहित प’क्राउ ! [सबैलाई सचेत गराउन सक्दो शेयर गरौँ] – Dainik Sangalo
सावधान !! यसरी धमाधम भित्रिए नेपालमा न’क्कली नोट : दशैँको मुखमा ३ लाख १९ हजार रुपैयाँ सहित प’क्राउ ! [सबैलाई सचेत गराउन सक्दो शेयर गरौँ]
October 26, 2020 366
चितवन । नेपालमापनि न’क्कली नोटको बिगबिगी बढेको छ । दुर्गम बजारसम्मपनि न’क्कली नोट पुगेको देखिन्छ । १ हजार दरको ३ लाख १९ हजार रुपैयाँ न’क्कली नोट सहित मकवानपुर राक्सीराङ गाउँपालिका–८ बस्ने २६ वर्षीय जित बहादुर लोप्चनलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेपछि प्रहरी नै झस्किएको छ ।
चितवन राप्ती नगरपालिका–५ भण्डारा, चौकी डाँडा भन्ने स्थानमा न’क्कली नोटको कारोबार गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराबाट खटिएको प्रहरीले उक्त स्थानबाट लोप्चनलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा लोप्चनको घरको मकैको कोन्युमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा उक्त न’क्कली नोट फेला पारी उनलाई प’क्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यता स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका–१ खोलेगाउँस्थित जंगलमा लुकाई राखेको ३०६.३४ क्यु फिट बराबरको २ सय १८ थान सालको काठ प्रहरीले ब’रामद गरेको छ ।
उक्त स्थानमा सालको काठ लु’काई छिपाई राखेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय चापाकोटबाट खटिएको प्रहरीले उक्त काठ फेला पारी ब’रामद गरेको हो ।
ब’रामद काठ आवश्यक कारवाहीको लागि सब डिभिजन बन कार्यालय चापाकोट स्याङ्जामा बुझाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङजाले जनाएको छ ।
त्यस्तै,बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कडले विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । उनले शनिबार अर्थात २४ अक्टुवर रोहनप्रीत सिंहसँग विवाह गरेकी हुन् । दुबैको विवाह दिल्लीको उत्तर नगरको एक गुरुद्धारमा भएको थियो । विवाह पछि दुबै एयरोसिटीस्थित होटल जे डब्ल्यु म्यारियट पुगेका थिए ।
त्यहाँ दुबैपक्षको नजिकका आफन्त, साथीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । विवाह समारोहमा दुबैले एकै कलरको आउटफिट्स लगाएका थिए । नेहा क्रिम कलरको लेहंगामा सजिएकी थिइन् । उनले यसको अलवा हेवी मेकअप, झुमकाको अलवा हातमा चुरा समेत लगाएकी थिइन् । नेहा दुलहीका रुपमा निकै सुन्दर देखिन्थिन् ।
रोहनप्रीतले पनि नेहाकै कलरको शेरवानी लगाएका थिए । नेहा र रोरनप्रीतको विवाह भिडियोले अहिले चर्चा बटुलिरहेको छ । भिडियोमा नेहा र रोहनप्रीत एकअर्कालाई बरमाला लगाउँदै गरेको समेत देख्न सकिन्छ । विवाह अगाडि नेहा र रोहनप्रीतको हल्दी र संगीत कार्यक्रमको भिडियो समेत बाहिर आएको थियो । जुन भिडियोले समेत चर्चा बटुलेको थियो ।
Prevचिनियाँ राजदूत यान्छीले बडादशैं पारेर सार्वजनिक गरिन् ‘रेशम फिरिरी’ गाएको भिडियो
Nextराष्ट्रपति भण्डारीकाे दशैँ : गुरु र आमाबाट टीका ग्रहण